Ingqungquthela: Ukuguqula indima "enamandla" - iGeofumadas
Ikhaya/ezintsha/INgqungquthela: Ukubuyisa iphepha "elinamandla"
Le 11 kaMeyi Bentley Systems izakubamba inkomfa yemithombo yeendaba apho iceba ukubonisa ubuchule bayo ukuze ijike iphepha lemveli libe yinto enamandla.
Isimemo sithunyelwe nguCristine namhlanje, ndicinga ukuba kwinyanga ephelileyo bazakunika ingxelo ngakumbi kwiwebhu okanye kwezinye iindawo. Okwangoku ndithatha iskoop kunye ne phe fumlelwe.
Kude kube ngoku sifundisiwe ukuba ikhompyuter kunye neziphumo zayo zedijithali ziya kwenza ukuba izinto ze-analog ezaziwa njengephepha zibe yinto yexesha elidlulileyo. Nangona kunjalo, ukuziqhelanisa kusifundise ukuba ukushiya bucala ukuxhasa okushicilelweyo, utyikityo lwayo, isitampu sayo kunye nophawu lwekhofi olchithekileyo alunakubuyiselwa endaweni enye ngaphandle kokuba sizimisele ukuthatha iingxaki eziza kubandakanya.
Ngethuba elidlulileyo uBentley uye wafaka ibhanti kwisiginitsha sedijithali, i yolondolozo lwembali, ulawulo lwabasebenzisi abaninzi kunye nokudibana. Eyona nto iphambili kuyo maqonga, I-Microstation kunye neProjekthi eNgqiqo igxile kulo, sinokucinga ukuba kukho enye into ezayo.
Iya kuba yimizuzu engama-30 ngeNtlanganiso ebukhoma. Ngomhla we-11 kaMeyi, ngo-9: 00 kusasa ngexesha laseMpuma e-United States nango-15: 00 emva kwemini Mbindi Yurophu.
E-United States naseKhanada, inani (888) 668 - 1399 liyafumaneka kwimibuzo ephilayo.
Kwamanye amazwe kukho (706) 758 - 9640
I-ID yeNtlanganiso: T4SQPB
Ikhowudi yokungena: DynamicPlo
Bonise ababoneleli ngeenkonzo kwiCadastre
Ungatshintsha njani uphawu kwiGoogle Earth